प्रदेश सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्री परिवर्तनको चर्चा - Jhilko
प्रदेश सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्री परिवर्तनको चर्चा
काठमाडौं, १२ मंसिर । कार्यसम्पादनमा चित्त नबुझेपछि भर्खरैमात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय सरकारका केही मन्त्रीहरुलाई हटाए । केहीको जिम्मेवारी हेरफेर गरे र नयाँलाई नियुक्त गरे । केन्द्र सरकारमा गरिएको मन्त्रीहरुको फेरबदलसँगै अब प्रदेश सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्री परिवर्तनको चर्चा चलेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा सबैभन्दा प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु कामयावी बन्न नसकेको गुनासो जनस्तरबाट आइरहेको छ ।
प्रदेशहरुमध्ये पनि प्रदेश नं. ३ स्रोत, साधन र प्रभावका हिसाबले सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु पनि झण्डावाला गाडीमा शयर गर्दै रिवन काट्न र भाषण गर्नमै मात्र व्यस्त रहेको आरोप लागेको छ ।
गठन भएको २ वर्ष पूरा हुन लागिसक्दासमेत प्रदेश नं. ३ सरकारले कुनै पनि उल्लेख्य काम गर्न नसकेको आवाज यतिबेला उठेको छ । यतिका समयसम्म न प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानीको टुङ्गो लगाउन सक्यो न त प्रदेशको नामाकरण नै !
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल हेटौंडा निवासी भएको हुँदा प्रदेश राजधानी हेटौंडाबाट अन्यत्र नसार्न देखिने गरी लविङ् गरिरहेका छन् । सिङ्गो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले आफ्नो गाउँटोलमै प्रदेश राजधानी राखिराख्न आवश्यकताभन्दा बढी ‘इनर्जी’ खर्च गरिरहेको आरोप खेप्नु परेको छ । राजधानी हेटौंडा कायम राख्नै लविङ्मा अल्झिएका कारण मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशमा गर्नु पर्ने अन्य विषयमा ध्यान दिन नसकेको बताइन्छ ।
त्यसो त कमिशन र विभिन्न एनजीओ÷आईएनजीओको स्वार्थअनुकूलको धन्दामा समेत ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुको नाम जोडिएर समाचार आइरहेका छन् । ललितपुरमा मुख्यमन्त्रीको निवासमा मर्मतसम्भारमा विदेशी लगानीको विवादासँगै कमिशनको खेलोमा प्रदेशका मन्त्रीहरुको नाम जोडिएर समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमालेले प्रदेश र संघीय संसदमा कार्यगत एकता गरेर चुनाव लडेका थिए । पछि यी दुई पार्टीबीच पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भयो । २ नम्बरबाहेक सबै प्रदेशमा यतिबेला नेकपाको सरकार छ ।
३ नम्बर प्रदेशमा तत्कालीन एमालेबाट मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, कैलाश प्रसाद ढुङ्गेल (आर्थिक मामिला तथा योजना), अरुण प्रसाद नेपाल (उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण) र दावा दोर्जे लामा (भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी) मन्त्री रहेका छन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट शालिकराम जमकट्टेल आन्तरिक मामिला तथा कानुन र युवराज दुलाल (शरद) सामाजिक विकास गरी दुई मन्त्री रहेका छन् ।
कैलाशप्रसाद ढुङ्गेल र अरुण नेपाल विद्यार्थी आन्दोलनमा लामो समय गुजारेर आएका हुन् । कुनै बेला शालिकराम जम्कट्टेल मजदुर आन्दोलनका चर्चित नेता थिए । युवराज दुलाल (शरद) पनि जनमुक्ति सेनाका सफल कमाण्डर थिए । तर, यतिबेला मुख्यमन्त्रीसहित अन्य कुनै पनि मन्त्रीले प्रभावकारी र परिणाममुखी काम गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेका छन् ।
३ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री चयनका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई बचन दिएर अन्याय गरेको भन्दै तत्कालीन एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले गुनासो गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यति धेरै असन्तुष्टिकाबीच मुख्यमन्त्रीको जिम्मा डोमणि पौडेललाई दिएका थिए । यतिबेला मुख्यमन्त्रीसहित ३ नम्बर प्रदेशका अन्य मन्त्रीहरुले पनि राम्रो नतिजा दिन नसकेको गुनासो बढ्दो छ । आफ्नो स्पिरिटि अनुसार परिणाममुखी काम गर्न नसकेको भन्दै आफ्नै मन्त्रिमण्डलका सदस्यलाई हटाउने र जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ३ नम्बर प्रदेशका त्यस्तै ढङ्गका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्ने प्रयास थालेको स्रोत बताउँछ ।
'वार्ता घर' मा बाबुराम, मज्जाले हेरे महराको फोटो !
शुरुमा आतङ्ककारीले विस्फोटक पदार्थ बोकेको एक कारलाई विस्फोटन गराएको पनि प्रत्यक्षदर्शीले...
कोरोना संक्रमित देशबाट आफ्ना नागरिक फिर्ता गर्न सर्वोच्चको...
सर्वोच्चले विदेशमा श्रम गरिरहेका नेपालीलाई फर्काउन दबाबसमेत आएको सन्दर्भमा उचित...
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार राजन भट्टराईको मुटुको शल्यक्रिया
शहीद गंगालाल ह्दयरोग केन्द्र बाँसबारीमा मुटुको दायाँतर्फको कोरोनरी आर्टरीको प्राइमरी...
भारतद्वारा पाकिस्तानी दूतावासका अधिकारी निष्काशित
पाकिस्तानी मन्त्रालयका अनुसार भारतले पाकिस्तान विरोधी प्रचारबाजी गर्नका लागि उनीहरूको...